Metlọ ọrụ ọchụchọ: Otu ụlọ ọrụ, SEO Platform na-ebugharị data | Martech Zone
Metlọ ọrụ ọchụchọ: ,lọ ọrụ, SEO Platform na-ebugharị data
Tọzdee, Eprel 21, 2016 Friday, April 22, 2016 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ SEO ngwaọrụ dị na idei mmiri karịa n'ahịa kwa ọnwa. Nsogbu nke imirikiti ngwaọrụ ndị a bụ na ha na-elekwasị anya na metrik nwere ike ịbụ ihe dị mkpa afọ ndị gara aga, mana ọ bụghị ọzọ. Searchmetrics bụ ụlọ ọrụ, SEO na-ebugharị data na-aga n'ihu na-agbanwe ma na-enye nsonaazụ maka ndị ahịa ya - mba ụwa.
Nchọpụta engines ụbọchị taa ma debe Web ngwa ngwa na-agbasawanye ngwa ngwa karịa karịa ndị bu ha ụzọ. Ha mepụtara iji luso spam na Weebụ na isiokwu nri. Ha agbanwewokwa iji bulite nsonaazụ njin ọchụchọ dabere na ngwaọrụ eji na ọnọdụ nke onye ọrụ. Nchọgharị ọchụchọ na-etinyezi ego ugbu a maka usoro ọdịnaya dị oke mkpa nke na-eme ka itinye aka.
N'ihi ya, arụmọrụ ọchụchọ na-arụkọ ọrụ nke ọma na arụmọrụ ọdịnaya gafee ọwa niile, site na weebụsaịtị na netwọkụ mmekọrịta. N'ezie, mgbanwe ndị a emeela usoro nyocha ọhụụ - ọ bụghị naanị ọchụchọ kamakwa ọchụchọ na njikarịcha ọdịnaya. Ma ebe ọ bụ na engines ọchụchọ etinyela ngere gburugburu ọtụtụ data ha, usoro ntanetị SEO nke chọrọ ịkọ ma nyochaa arụmọrụ ọdịnaya chọrọ iweta data nke ha bara ọgaranya na nnọkọ ahụ. Na ngwaọrụ dị ike iji nyochaa ya.
Metlọ ọrụ ọchụchọ emeela nchekwa data akụkọ ihe mere eme gbasara afọ 7 na ihe karịrị ijeri ozi 250, gụnyere ọkwa isiokwu, okwu ọchụchọ, njikọta mmekọrịta na backlinks. Kama ịdabere na data ndị ọzọ, dataset ha bara ụba na-akwado nyocha ụwa na arụmọrụ arụmọrụ ụwa. Ọ na-agụnye zuru ụwa ọnụ, mobile na obodo data ekpuchi organic na-akwụ ụgwọ search, yana-elekọta mmadụ media. Metlọ ọrụ ọchụchọ nwere ohere zuru ụwa ọnụ kachasị maka ikpo okwu SEO ọ bụla, na-agagharị na Weebụ mgbe niile n'ihe karịrị mba 1.
Akụkụ dị mkpa nke Searchmetrics Suite
Ọdịnaya Ọdịnaya - Nchọgharị ọchụchọ na-achọpụta ndị asọmpi ọdịnaya jiri dọta ndị na-azụ gị. Ọ na-egosikwa gị otu ị ga - esi wuo ikere ahịa - yana ibe ọdịda ga - adịrị ndị na - adọta ndị ga - azụta.
Mobile ekwentị SEO - Site na Searchmetrics, ị ga - eru ndị na - ege gị ntị na - agagharị, iji igwe okwu kachasị nwee ọrụ ziri ezi na ntanetị na nghọta okporo ụzọ. The Searchmetrics Mobile Nzipụta akara bụ ahịa na-eduga egosi nke mobile online ọnụnọ.
Scalable Site njikarịcha - Searchmetrics Suite njikarịcha saịtị na-eme ihe dị omimi iji chọpụta nsogbu na njehie, ma nyere gị aka ibute ihe idozi mbụ. Nwere ike iji desktọọpụ na arụmọrụ arụmọrụ tụnyere desktọọpụ anyị pụrụ iche na ndị ọrụ na-akpụ akpụ mkpanaka.
ROI Reporting na Dashboards - Site na Searchmetrics Suite, ị nwere ike nyochaa, tụọ, amụma na ịkọ akụkọ gbasara mgbasa ozi ahịa dijitalụ gị niile, gụnyere ọchụchọ, ọdịnaya, PPC na mmekọrịta.
Nzipụta Akara - Referencing nke kachasi ihe ọmụma banyere data na ụwa, ọkọlọtọ ụlọ ọrụ Searchmetrics Visibili Score na Mobile Visibiliti dabere na nha nke desktọọpụ gị na ntanetị n'ịntanetị. Akara ndị a na-eji olu ọchụchọ, ụdị usoro dị iche iche dị egwu na algorithms mmụta igwe iji gbakọọ ohere nke ịpị n'ime nsonaazụ ọchụchọ.
Metlọ ọrụ ọchụchọ bụ nyocha nyocha na njikarịcha ọdịnaya na-eduga, na-egosipụta afọ 10 nke ngwaahịa ohuru, nke otu n'ime 10 SEOs a ma ama n'ụwa na-eduzi, Nwachukwu Nwogu. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100,000 ndị ọrụ ụwa, Searchmetrics Suite bụ nyocha # 1 na njikarịcha ọdịnaya nke nhọrọ maka eBay, Staples, Volvo, T-Mobile, Siemens, Tripadvisor na ndị ọzọ.
Mụtakwuo Banyere Searchmetrics
Metlọ ọrụ ọchụchọ na-anapụta ụlọ ọrụ SEO na nyocha ahịa ọdịnaya, ndụmọdụ, amụma na ịkọ maka ụlọ ọrụ chọrọ ndị ahịa nwere ike ịchọta ha ọsọ ọsọ. Ọ pụtara atụmanya na ndị ahịa na-etinye obere oge n'ịchọ na oge ịzụta oge. Ha na-akpọ ya njikarịcha ahụmahụ ọchụchọ.
Ngosipụta: A na-akwado post a site na ọdịnaya Chọọ Mmetụta Gị.
Tags: njikarịcha ọdịnayadata-chụpụrụ seoụlọ ọrụ seoụlọ ọrụ seo platformmarcus tobermobile seo nyochanjikarịcha saịtị nwere ikeNchọgharị ọchụchọseo mbadambaanụrị akụkọcraw saịtịvisibiliti akara
Free Mobile Na-anabata Email Ndebiri site Litmus
Ebumnuche nke Ngwaọrụ Akụrụngwa na Mgbalị ire ahịa